Yemen oo sheegtey in aysan ciidammo u soo direyn Somaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Yemen oo sheegtey in aysan ciidammo u soo direyn Somaliya. [Akhris …]
Juunyo 30, 2009 12:00 b 0
San?a, June 30 – Sida ay qortey Jariidadda Yemen Times, saraakiil sar sare oo Yemen ah ayaa waxaa ay shaaca ka qaadeen in dawladda Yemen aysan haba yaraatee wax ciidammo ah aysan u soo direen dalka Soomaaliya.
Warka waxaa uu intaasi ku darayaa in dawladda Yemen ay ka qeyb qaadaneyso oo qura taageerada dawldda Federaalka Soomaaliya hase ahaatee aysan xilligan diyaar u ahayn in ay ka qeyb qaadato la safashada dhinacyada xilligan gudaha dalka Soomaaliya isku haya.
Sidoo kale Jariidadda ayaa waxaa ay sheegtey in Shan beri ka hor ay khadka Taleefanka ku wada hadleen Madaxweynaha dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax iyo dhiggiisa Soomaaliya Shariif Sh Axmed, waxa ay ka wada hadleenna ay ahayd oo qura sidii uu u xasili lahaa dalka Soomaaliya iyo sidi ay u cago dhigan lahayd dawladda Soomaaliya ee iminka jirta.
Sida ay qortey Wakaaladda Wararka ee dalka Yemenna labada dal madaxdooda kama aysan wada hadlin wax ciidammo nabad ilaalin ah oo Yemen ay u soo direyso dalka Soomaaliya.
Yemen iyo dawladaha kale ee Afrikaanka ah ee Soomaaliya ay Awd wadaagga ay yihiin ayaa waxaa saran cadaadis ah in ciidammo nabad ilaalin ay u soo diraan dalka Soomaaliya si looga hortago kooxaha ka soo horjeeda dawladda KMG ku waas oo doonaya in ay ku sii fidaan dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sh Axmed ayaa toddobaadkii hore waxaa uu galiyey dalka Soomaaliya xaalad deg deg ah isaga oo dalbadey in waddamada deriska ah iyo kuwa Caalamkaba ay ka qeyb qaataan hawlaha nabad ilaalinta ee ku habboon in xilligaan laga fuliyo dalka Soomaaliya si loo wiiqo awoodda kooxo uu ku tilmaamey in ay yihiin Argagixiso hase ahaate ay horey iskula ahaan jireen mucaarad xilligii uu dalka Madaxweynaha ka ahaa Mudane Cabdullahi Yuusuf Axmed.
Waxaana guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Sh Aadan Maxamed Nuur uu ugu baaqey dalalka Kenya, Itoobiya, Djibuti iyo Yemen in ay ciidammo nabad ilaalin ah u soo diraan dalka Soomaaliya si loo bad baadiyo dawladda KMG.
Barnaamij gaar ah oo ku saabsan xuska munaasabada 1-da July ee maalinta Qaranimada Somaliya. [Dhegaysi …]
G/Wakiillada ee DG Puntland oo si Aqlabiyadleh u ansixiyey Dastuurka Cusub ee Puntland. [Akhris …]